Ehlotyeni ka-2009, iifowuni zifakela lonke iRwanda. Ukongezelela kwizigidi zeefowuni ezivela kwiintsapho, abahlobo kunye nabahlobo bezoshishino, malunga no-1 000 baseRwanda bafumana ifowuni evela kuJoshua Blumenstock kunye nabalingane bakhe. Aba baphandi babecinga ubutyebi nobuhlwempu ngokuqhuba uphando lwe-sampula engahleliyo yabantu abavela kwisiseko sedatha yezigidi eziyi-1.5 zabathengi befowuni. I-Blumenstock kunye noogxa bacela abantu abakhethiweyo ngokungafuneki ukuba bathathe inxaxheba kwisaveyi, bachaze uhlobo lophando kubo, baza babuza uluhlu lwemibuzo malunga neempawu zabantu, ezentlalontle kunye nezoqoqosho.
Yonke into endiyithethileyo okwangoku yenza ukuba kuvezwe njengophando lwezesayensi zentlalo. Kodwa oko kuza okulandelayo akusiyo yendabuko-ubuncinci engekabikho. Ukongeza kwidatha yophando, i-Blumenstock kunye noogxa nabo babenolwazi olupheleleyo lweefowuni zabo bonke abantu abayizigidi eziyi-1.5. Ukudibanisa le mibini imithombo yedatha, basebenzise idatha yesava ukuqeqesha umzekelo wokufunda umatshini ukuqikelela ubuncwane bomntu ngokusekelwe kwiirekhodi zabo zeefowuni. Emva koko, basebenzisa lo mzekelo ukuqikelela ubuncwane babo bonke abathengi abayizigidi eziyi-1.5 kwisiseko sedatha. Baphinde baqikelele indawo yokuhlala kuyo yonke i-1.5 million abathengi basebenzise ulwazi lwemihlaba elifakwe kwiirekhodi zeefowuni. Ukubeka konke oku kunye-ubutyebi obuqikelelwayo kunye nendawo yokuhlala yokuhlala-baye bakwazi ukuvelisa iimephu ezichanekileyo zokusabalalisa ubutyebi eRwanda. Ngokukodwa, banokuvelisa ubutyebi obuqikelelwayo kwiiyunithi ezingama-2,148 zeRwanda, inxalenye encinane yokulawula kweli lizwe.
Ngelishwa, kwakungenakwenzeka ukuqinisekisa ukuchaneka kwezi ziqikelelo kuba akukho mntu wakhiqiza uqikelelo lweendawo ezincinci kwiindawo zaseRwanda. Kodwa xa i-Blumenstock kunye noogxa bebonke baqikelela ukuqikelela kwabo kwizithili ezingama-30, bafumanisa ukuba ukuqikelelwa kwabo kwakufana nokuqikelela kwi-Survey and Demographic Survey, ebonwa ngokubanzi njengowomgangatho wegolide ophando kumazwe asakhulayo. Nangona ezi ndlela zimbini zivelise ukuqikelela okufana nale meko, indlela ye-Blumenstock kunye nabalingane yayingamaxesha angama-10 ngokukhawuleza kwaye amaxesha angama-50 angabizi ngaphezu koPhando lwaMveli noluntu lwezeMpilo. Ezi ngqikelelo ezibiza ngokukhawuleza ngokukhawuleza kwaye ezantsi zidala amathuba amasha kubaphandi, oorhulumente kunye neenkampani (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Olu phofu lufana novavanyo lwe-Rorschach inkblot: oko abantu abakubonayo kuxhomekeka kwimvelaphi yabo. Uninzi lwezenzululwazi zentlalo lubona isisombululo esitsha esingasetyenziselwa ukuvavanya iingcamango malunga nophuhliso loqoqosho. Uninzi lwezentlupheko zedatha lubona ingxaki entsha yokufunda komatshini. Abantu abaninzi bezoshishino babona indlela enamandla yokuvula ixabiso kwidatha enkulu abaye baqokelela. Ubuninzi bobucala obunobungqina bubona isikhumbuzo esibuhlungu sokuba siphila ngexesha lokujonga uluntu. Kwaye ekugqibeleni, abaninzi abenzi bomgaqo-nkqubo babona indlela iteknoloji entsha inokunceda ngayo ukudala ihlabathi elingcono. Enyanisweni, olu sifundo luzo zonke ezo zinto, kwaye ngenxa yokuba le mix mix of qualities, ndiyibona njengefestile kwikamva lophando loluntu.